တရုတ် ကျူရှင် ကုမ္ပဏီ Tal ၏ ပညာရေး ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈. ၈% ကျဆင်း ခဲ့သည် – Pandaily
Feb 22, 2022, 11:55မနက် 2022/02/22 14:18:13 Pandaily
တရုတ် ကျူရှင် ကုမ္ပဏီ Tal Education၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ် ခဲ့သော ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏တတိယ သုံးလပတ် အတွက် စာရင်း မသ ွင်း ထားသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအရ ၎င်း၏ အသားတင် ၀ င်ငွေသည် ယခင်နှစ် အလားတူ ကာလက ဒေါ်လာ ၁. ၁၂ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် တစ်နှစ်လျှင် ၈. ၈% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၁. ၀ ၂ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ TAL သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက ဒေါ်လာ ၄၃. ၆ သန်း နှင့်နှိုင်းယှဉ် လျှင်ဒေါ်လာ ၉၉. ၄ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် ကိုး လတာ ကာလအတွင်း TAL ၏အ သားတင် ၀ င်ငွေသည် ယခင်နှစ် အလားတူကာလ က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၁၃ ဘီလီယံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၈၅ ဘီလီယံအထိ ၂၂. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေး ဆုံးရှုံးမှု မှာဒေါ်လာ ၆ ၁၅. ၂ သန်း ဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ် အလားတူ ကာလက ဒေါ်လာ ၁၄၁ သန်း ရှိခဲ့သည်။
တရုတ်၏ “ နှစ်ဆ လျှော့ချခြင်း” မူဝါဒကို တရားဝင် အကောင်အထည်ဖော် ပြီး ကတည်းက ပုဂ္ဂလိက ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်ပြောင်း မှုသည် များစွာ အာရုံစိုက် မှု ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် လမှ စ၍ Tal သည် အရည်အသွေး ပြည့်ဝ သော ပညာရေး၊ ဂေါပက ၊ ကော်ပိုရိတ် ရေးရာ နှင့် ဘွဲ့ လွန် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ များ၊ ဘာသာစကား သင်တန်းများ နှင့်ပြည်ပ တွင် ပညာသင်ကြား ခြင်းစသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Tal ၏ပထမဆုံး ခုန်ပျံကျော်လွှား မှုသည် အရည်အသွေး ရှိသော ပညာရေး ထုတ်ကုန် ငါးခု ဖြစ်သော ဒ ရာမ ာ၊ ဗေဒ ၊ ထောက်လှမ်း ရေး၊ အဟော အပွေ ာက ော ငျး မှုနှင့် စာတတ်မြောက် မှုတို့ကို စတင်ခဲ့သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအတွင်း Tal သည် သင်ကြား ရေးနှင့် သုတေသန တိမ်တိုက် စနစ်ကို ဆရာ များအား အခမဲ့ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ပြည်နယ်နှင့် မြို့ကြီး ၃၁ ခုရှိ သင်တန်းကျောင်း ၄၀, ၀၀၀ ကျော်မှ ဆရာ ၁၄၀, ၀၀၀ ကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အရ TAL ၏ နိုင်ငံရပ်ခြား ဘဏ်ခွဲ များကို အမေရိကန်၊ ယူကေ နှင့် စင်္ကာပူ တို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ ၏စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များအပြင် TAL သည် ၀ န်ထမ်း အပြောင်းအလဲ များစွာ ကိုလည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည်။ “ Double Down” မူဝါဒ မစတင် မီ Tal တွင် ၀ န်ထမ်း ၁၀၀, ၀၀၀ နီးပါး ရှိ ခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် ၁၀, ၀၀၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိ တော့သည်။
ပေကျင်း ဒေသန္တရ အစိုးရသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် Gaotu Technology သည် ကြာသပတေး နေ့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံး သတင်း များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ အကုန်တွင် ကုမ္ပဏီသည် အထက်တန်း ကျောင်းသား များအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်း တော့ မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည် က၎င်း၏ ဝင်ငွေ အပေါ် သိသိသာသာ ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှုရှိ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Gao Tuchi သည် ၀ င်ငွေ သိသိသာသာ ကျဆင်း မည်ဟုမျှော်လင့် ရသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် New Oriental သည် တိုးတက်မှု အလားအလာ အသစ် များကိုရှာဖွေရန် e-commerce တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု နယ်ပယ် သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လ အတြင္း စုစုေပါင္း ပစၥည္း ၃၃ ၅ မ်ိဳး ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယြမ္ ၄ ဒသမ ၅ သန္း (ေဒၚလာ ၇၁ ၀၃ ၉၅) သာ ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပညာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ဦးျမင့္သြင္က စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဖိအားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းထြက္ေန
ဇြန္ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းက Tuit Motor ၏ CEO ျဖစ္သူ Larry Chen က အဆိုပါ စာသားသည္ မၾကာေသးမီက အမ်ားျပည္သူ၏ ကုမၸဏီအေပၚ သံသယျဖစ္ေစေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
ဆောင်းရာသီ အားလပ် ရက်တွင် အထက်တန်း ကျောင်းသား များအတွက် အွန်လိုင်း ကျူရှင် ကို ပေ ကျ င်းက ရပ်ဆိုင်း မည်
ပေကျင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် ယခုအပတ် တွင် ထိပ်တန်း အွန်လိုင်း ကျူရှင် ကုမ္ပဏီများ နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခဲ့ပြီး ဆောင်းရာသီ အားလပ်ရက် များအတွင်း အထက်တန်း ကျောင်းသား များအတွက် သင်တန်းများ ရောင်းချ ခြင်းကို ရပ်တန့် ရန်နှင့် သူတို့ ပေး ဆောင်သည့် မည်သည့် အခကြေးငွေ ကိုမဆို ပြန် အမ်း ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Industry Jan 27 ဇန်နဝါရီ 27, 2022
Gao Tuchi သည် ၀ င်ငွေ သိသိသာသာ ကျဆင်း မည်ဟုမျှော်လင့် ရသည်
ကို ထြဋ္ ေခ် သူပေကျင်း ဒေသန္တရ အစိုးရသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ လိုအပ်ချက်များကို ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် တရုတ် ၏အွန်လိုင်း အမှုဆောင် အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူသည် ကြာသပတေး နေ့တွင် စီးပွားရေး နောက်ဆုံး သတင်း များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ် ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ကုမ္ပဏီ New Oriental သည် ၂၀၂၁-၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏ပထမ တစ်ဝက် ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာကို အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Feb 23 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2022